Lahatsoratra nataon'i Augustin Prot ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Augustin Prot
Augustin no mpiara-manorina an'i weglot, vahaolana amin'ny fiteny maro amin'ny tranonkala. Noforonina tamin'ny 2016 - Weglot dia natsangana mba hahatonga ny fandikana tranonkala haingana, tsotra ary haingana. Miaraka amin'ny sehatra ara-bola, Augustin nifindra tany amin'ny tontolon'ny SaaS mba hiara-mahita vahaolana manampy ireo orinasa hiteraka fitomboana iraisam-pirenena.
Ecommerce manerantany: Fandikana mandeha ho azy vs Masinina vs Vahoaka ho an'ny fananganana toerana
Alarobia, Novambra 18, 2020 Alarobia, Novambra 18, 2020 Augustin Prot
Miroborobo ny varotra ecommerce. Na dia vao 4 taona lasa izay, ny tatitra iray tao Nielsen dia nanolo-kevitra fa 57% amin'ireo mpiantsena no nividy tamina mpivarotra antsinjarany tao anatin'ny 6 volana lasa. Tato anatin'ny volana vitsivitsy, ny COVID-19 manerantany dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fivarotana eran-tany. Ny fivarotana biriky sy mortara dia nihena be tany Etazonia sy UK, miaraka amin'ny fihenan'ny tsenan'ny mpivarotra antsinjarany any Etazonia amin'ity taona ity.